China Portable Insect Repelling Jiro orinasa mpamokatra sy mpanamboatra | Meiling
Hery naoty 5W
Haben'ny vokatra 77 * 76 * 138mm
Takelaka fikirakirana Fanaraha-maso mikasika (fametrahana ora 10 ora)
Faritra fampiharana 30m2 (an-trano), 3m (ivelan'ny trano)
Fepetra fonosana 515X415X415mm（40PCS / Carton)
1. lamaody sy azo ampiharina, mety ampiasaina raha mampiala voly.
Fanombohana bokotra hanombohana hanamorana ny mpampiasa. Ny famandrihana USB, dia azo ampiasaina amin'ny toerana tianao. Miaraka amin'ny ranon-tsolika, azo antoka sy mahomby voajanahary, mety amin'ny fampiasana ny reny sy ny foetus. Hazavan'ny alina malefaka mafana, milamina sy ahazoana aina. Fametrahana fotoana 10 ora. Mandroaka moka amin'ny fomba mahomby amin'ny famoronana 30m2 faritra fiarovana anatiny na 3 metatra ivelan'ny fiarovana.
2. Fandidiana mora
Kitiho ny herinaratra ary hivadika ilay jiro maitso ny bokotra mba handrehitra ny fomba famonoana moka mamonjy angovo. Fanakatonana mandeha ho azy aorian'ny 10 ora.
3. Mandroaka moka mahomby
Mamorona 30m2 faritra anatiny na 3 metatra fiarovana ivelan'ny trano, mety tsara amin'ny fialamboly amin'ny toerana anatiny sy ivelan'ny varavarana toy ny bozaka, lavarangana, patio, pisinina na tokotanin-tsambo; teknolojia voaporofo ampiasaina hiadiana amin'ny moka amin'ny toerana henjana indrindra eto an-tany; manome fiarovana 10 ora.
4. Stylish, mety, azo entina
Ny jiro famonoana moka atokisana no fanomezana tonga lafatra ho an'ny tompon-trano vaovao, mpampiantrano, misotro ronono, nahazo diplaoma tamin'ny oniversite, zaridaina na mpikarakara.
5. 100% azo antoka ho an'ny biby fiompy sy biby fiompy
Ny jiro mandroaka bibikely dia azo antoka ho an'ny vehivavy bevohoka sy ny zaza. Tsy misy poizina, tsy misy poizina, tsy misy taratra, ary tsy mila manadio ny bibikely maty, tsy mila bateria ary kely ny vidin'ny herinaratra. Manome anao trano azo antoka 100% sy trano fialana aina.
Previous: Steamer garment
Manaraka: Mini Portable Air Cooler
Jiro famonoana bibikely
Jiro miaro ny moka
Jiro solika mpamono moka